Juneau, AK • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Izao tontolo izao amin'ny toerana iray. Karazana fanorana rehetra: Fanorana Nuru, fikosohan-batana, fanorana vatana manontolo.
Juneau dia miavaka amin'ny renivohitr'i Etazonia satria tsy misy lalana mampifandray ny tanàna amin'ny fanjakana sisa. Honolulu, Hawaii, no hany renivohi-panjakana hafa tsy mifandray amin'ny lalana mankamin'ny sisa amin'ny Amerika Avaratra. Ny tsy fisian'ny tambajotram-pifandraisana dia vokatry ny tany mikitoantoana izaitsizy manodidina ny tanàna. Izao tontolo izao amin'ny toerana iray. Karazana fanorana rehetra: Nuru fanorana , Voninkazo, Fanorana vatana manontolo.